Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Bashannana Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf
Halkan Onkoloolessa 11 halkan addaa ta'uuf deema, jedhu qopheessitoonni
Dargaggoonni Oromo “Oromo Voice International OVI” (Sagalee Oromoo Idl-addunyaa), sagantaa agarsiisa aadaa mataduree Tokkummaa jedhuun Onkoloolessa 11 bara 2015 Toroontotti qopheessuuf qophii irra jiraachuu isaanii ifa godhaniiru.
Ibsi bahe ifa kan taasise kaayyoon agarsiisa kanaa bal’innaa fi bareedina Oromiyaan qabdu hundaa ifatti mul’isuu fi calaqqisiisuudha. Kunis kan ta’u bifa sirbaa, dhiichisa, walaloo, mudhisa artii, dramaa fi sagantaawaan adda addaatiin. Qophii bashannansiisaafi barsiisaa ta’e kanarratti akka argamtan qopheessitoonni sagantichaa hunda keessaniif waamicha kabajaa dhiheessaniiru.
Ergaa guutuu Sagalee Oromoo Idil-addunyaa
Dargaggoonni Oromo “Oromo Voice International OVI” (Sagalee Oromo Idle Addunyaa), sagantaa agarsiisa aadaa mataduree Tokkummaa jedhuun guyyaa dilbataa Onkololeessa 11 bara 2015 qopheesse irratti akka nuuf argamtan kabajaan isin affeeree jirra. Bakki sagantichaa (3710 Chesswood Dr. Toronto, Canada) sa’aa 4:00 (sa’aa booda) haga halkan walakkaa sa’a 1:00 tti.
Kaayyoon agarsiisa kanaa bal’innaa fi barreedinna Oromiyaan qabdu hundaa mul’isuu fi calaqqisisssuuf yoo ta’u, karaa sirbaa, dhiichisa, walaloo, mudhisa artii, dramaa fi sagantaawaan adda addaa biraas qabatee dhiyaata. Walumaa galatti qophiin kun bashannaansiisaa fi barsiisaa akka ta’uufii galagala addaa ta’ee akka yaadatamu abdii qabna. Qophiin kana yeroo jalqabaatiif mata duree Tokkummaa jedhuun kan qopheessaa jirru yoo ta’u innis akkuma maqaa isaa tokkummaa hawaasa oromoo judduutti cimsuu fi walitti dhufeenymmaa jabeessuu irratti xiyyeefata.
Sagaleen Oromo Idle Addunyaa (OVI) gurmuu dargaggoota Oromoo xiyyeefannaa fi ka’umsi isa aadaa uummata Oromoo ifatti baasee agarsiisuu, qodaa fi hambaa Oromoo barsiisuu fi beeksisuu fi dargaggoo Oromoo humneessuu irratti hojjataa. Nuyi Dargaggoon Oromo Torontoo fi naannaawaa (GTA) tti argamnu sagantaa kana qopheesuuf yoo karoorfannu waldaaleen hawaasa Oromoo Hamilton, Kitchener/Waterloo, fi Ottawa sagantaa bareedaa nuu qopheesaa jiru irraati hirmaataa jiru.
Kanaafuu sagantaa dargaaggoon Oromoo akka Oromootti of ibsan aaddaa fi eennyummaa Oromoo olqabuuf qopheessan kana deegartanii akka irratti argamtan abdachuun kabajaan isin affeerree jirra. Nullee dalagaa kana fedhii guddaan waan dalagaa jirruuf bakka isin itti argamtanitti kabajuuf barbaanna.
Isiin akka keessummaa keenyaatti simachuu hedduu irraa gammanna, yoo gaaffii qabaattan karaa iimeelii keenya kanaatii nuqunamaa. Yoo karaa qunnamtii biraas filattan ta’e nu beeksisuuf duuba hin jedhiinaa.
Sagalee Oromo Idle Addunyaa, OVI
English version Oromo Voice International (OVI).Eng
sagalee oromoo idil-addunyaa
Previous articleYoomiif Qajeelchaa wolmorkii Diamond League Biraasilsitti geggeefame injifate
Next articleSuudaan Mollaa Asgadoomii fi woraana isaa dabarsitee Itoophiyatti laatte